AC Milan Oo Xaqiijisay Wadahadalada Divock Origi
HomeWararka CiyaarahaAC Milan oo xaqiijisay wadahadalada Divock Origi
May 28, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Agaasimaha farsamada AC Milan Paolo Maldini ayaa xaqiijiyay in kooxda heysata horyaalka talyaaniga ay horumar ka sameyneyso wadahadalada ay kula soo saxiixaneyso weeraryahanka Liverpool Divock Origi .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa ka tagi doona Anfield marka uu dhamaado qandaraaskiisa bisha soo aadan, waxaana uu durbaba u ciyaaray kooxdiisa kulankiisii ​​ugu dambeeyay.
Origi ayaa lagu qastay inuu seego kulankii ugu dambeeyay ee Premier League ee ay ka badiyeen Wolverhampton Wanderers.
27-sano jirkaan ayaa 8-dii sano ee lasoo dhaafay kor u qaaday goolasha soo daahay ee Reds, inkastoo uu si joogto ah ugu dhibtooday inuu ka saaro weerarka Mohamed Salah , Sadio Mane iyo Roberto Firmino .
Imaanshiyaha Luis Diaz iyo Diogo Jota ayaa Origi hoos ugu sii dhigay rajadii garoonka Anfield, Jurgen Klopp ayaana xaqiijiyay horaantii bishaan inuusan sii joogi doonin Merseyside xilli ciyaareedka soo socda.